स्थानीय निर्वाचन : शीर्ष नेताहरु कसले कहाँबाट गर्दैछन् मतदान ? « Lalitpur Khabar
२९ वैशाख ०७९, काठमाडौं । शुक्रबार हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरुले मतदान गर्दैछन् । मतदानका लागि नेताहरु गृह जिल्ला पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा डडेल्धुरामा मतदान गर्ने भएका छन् । उनले गन्यापधुरा गाउँपालिकाको असिग्राम मावि रुवाखोलामा रहेको मतदान केन्द्र ‘ख’ बाट मताधिकार प्रयोग गर्ने भएका हुन् ।
सहायक मतदान अधिकृत दिलीप तामाङका अनुसार देउवाको मतदाता नामावली रुवाखोलामा छ। देउवा गृह प्रदेशमा छन्। उनी शुक्रबार मतदानपछि मात्र काठमाडौं फर्कँदैछन्।
त्यसैगरी मतदानका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवन पुगेका छन् ।दाहाल मतदानको दिनभन्दा दुई दिन अगाडि नै चितवन आएर बसेका हुन् । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखको उमेदवार रेणु दाहाल हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहाले भरतपुर–१४ स्थित पुलिस स्कुल शिवनगरबाट मतदान गर्दै छन् ।
यता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सूर्यविनायक नगरपालिकाको बालकोटस्थित शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा मतदान गर्दैछन् । मतदान केन्द्र ‘क’ मा ओलीले बिहान ८ बजे मतदान गर्ने भएका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रौतहटको गौरबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्ने भएका छन् । उनले रौतहटको गौर नगरपालिका वडानम्बर २ मा रहेको रामजानकी कन्या मन्दिर मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने नेपालको सचिवालयले जनाएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालको गृह जिल्ला पनि रौतहट हो ।
संघीय समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखाबाट मतदान गर्दै छन्। डा. भट्टराईले गोरखाको पालुङटार नगरस्थित अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने भएका हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा भट्टराईले केही दिन अघि गृह जिल्ला पुगिसकेका छन् ।
यस्तै पूर्व झलनाथ खनालले इलामको सूर्यविनायक नगरबाट मतदान गर्दैछन् , नगरको रम्फोक मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न लागेका हुन्, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता समेत रहेका खनाल इमाल पुगिसकेका छन् ।